सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ।बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं – Sandesh Munch
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ।बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं
May 21, 2020 267
दैनिक ४ देखि ५ वटा बदाम खानुहोस् । यसमा पाइने भिटामिन इ, पोलिस्याचुरेटेड र मोनोस्याचुरेटेड फ्याटले भोक नियन्त्रण गर्दछ । यसले पेटको बोसो कम गर्नमा सहयोग गर्दछ ।
खाना खाने बेलामा पानी नपिउनुहोस् । यसले खाना ठिक तरिकाले डाइजेस्ट हुन दिँदैन जसका कारण बोसो बढ्न थाल्छ । खाना खाएको १० वा १५ मिनेट पछि मात्र पानी पिउनुहोस् ।
ग्रीन टीमा पर्याप्त मात्रामा थायनाइन नामक एमिनो एसिड हुन्छ । यो एसिडले भोकलाई नियन्त्रण गर्दछ । यसले पेटको बोसो कम हुन्छ ।
नियमित रुपमा २ देखि ३ किलोमिटर मर्निङ वकमा जानुहोस् । यसले क्यालोरी बर्न गर्न सहयोग गर्नेछ र बोसो घटाउनलाई सहयोग गर्दछ ।
Prevलकडाउनमा पेट बढेर हैरान हुनुहन्छ भने, यी १२ तरिकाले सजिलै घटाउनुहोस्
Nextयो देवता देख्ने बितिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्। तपाइको दिन शुभ हुने छ हेर्नुहोस राशिफल !
सुरक्षा विज्ञहरूले अहिलेको जस्तो भूराजनीतिक परिस्थितिमा सेनाले सहायक रथीको तहमा रहेको पदमा महासेनानीलाई सैनिक सहचारी बनाएर पठाउनु ठीक नभएको बताएका छन् । यसले सैनिक कूटनीतिलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सूर्य नेपालद्वारा कोरोना कोषमा एक करोड
आज – ३२ साउन २०७७ आइतवार को राशिफल
थाहा छ ! बस्ने कुर्सीले तपाईको भाग्य बदल्न सक्छ नी ! हेर्नुहोस